IATA: 12-mwedzi yechokwadi yeEU COVID Chitupa yaizodzivirira kudzoreredza kwekushanya
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » IATA: 12-mwedzi yechokwadi yeEU COVID Chitupa yaizodzivirira kudzoreredza kwekushanya
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kusarura pakati pemajekiseni akatenderwa neWHO kutambisa zviwanikwa uye chipinganidzo chisingakoshi kurusununguko rwevanhu rwekufamba.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakadana kuchenjerera ichipindura Kurudziro yeEuropean Commission kuti EU Digital COVID Chitupa (DCC) inofanira kungoramba ichishanda kusvika mwedzi mipfumbamwe mushure memushonga wechipiri wekudzivirira, kunze kwekunge booster jab yaitwa.
"EU DCC ibudiriro huru mukufambisa nzira yakajairwa mukondinendi yese kugadzirisa dambudziko rehutano reCCIDID-19 uye kufambisa rusununguko rwevanhu kuti vafambe zvakare. Inosimbisa kupora kwakashata muchikamu chekufambisa uye chekushanya. Uye zvakakosha kuti chero shanduko pairi ive nenzira yakabatana-inoziva kukanganisa kwemitemo yakasiyana-siyana nenyika dzenhengo imwe neimwe uye inosimudzira kumwe kuwirirana. Europe", akadaro Rafael Schvartzman. IatăMutevedzeri weMutungamiri weDunhu kuEurope.
Nyaya yakakosha ndeyechokwadi chekudzivirira uye chinodiwa chebooster shots. Sezvo kusadzivirirwa kunopihwa nejekiseni kuchipera, booster jabs iri kuwedzera kupihwa kuwedzera uye kusimbisa mhinduro yezvirwere zvevanhu. Nekudaro, kana mabooster shots akarairwa kuchengetedza kutendeseka kweDCC, zvakakosha kuti nyika dziwirirane nekuita kwavo kune hurefu hwenguva inobvumidzwa pakati penzvimbo yekudzivirira kwakazara uye kupa imwezve dosi. Mwedzi mipfumbamwe yakataurwa neKomisheni inogona kunge isina kukwana. Zvingave nani kunonoka ichi chinodikanwa kudzamara nyika dzese dzave kupa booster jabs kuvagari vese, uye kwemwedzi gumi nemiviri yechokwadi kupa nguva yakawanda yekuti vanhu vakwanise kuwana dosi rekusimudzira, tichitarisa nzira dzakasiyana dzekudzivirira nyika dziri kutorwa.
"Chikumbiro chekugadzirisa zvipingamupinyi pachokwadi cheDCC chinogadzira matambudziko mazhinji anogona kuitika. Vanhu vakawana mushonga wekudzivirira pamberi paKurume, kusanganisira vashandi vazhinji vehutano, vachada kunge vawana booster na11 Ndira kana kuti vangatadza kufamba. Will EU nyika dzinobvumirana pane imwe nguva yakatarwa? Izvo zvinodikanwa zvichawiriraniswa sei nenyika zhinji dzakagadzira COVID pfuura dzinozivikanwa neEU? Uyezve, iyo World Health Organization (WHO) yati mabooster shots anofanirwa kukosheswa kumapoka ari munjodzi asina kuve nedoro rekutanga, ndoda kuwedzeredza. Pasi rose, chirongwa chekudzivirira chichine nzira refu yekufamba munyika dzakawanda dzichiri kusimukira uye chinotarisisa chinofanira kunge chiri pakuona kuti vaccine yakaenzana. Tichifunga kuti ruzhinji rwevafambi vendege havasi mumapoka ari munjodzi zvakanyanya, kubvumidza nguva yemwedzi gumi nembiri isati yadiwa ingave nzira inoshanda kune vafambi uye nzira yakanaka yekudzivirira vaccine, "akadaro Schvartzman.
Chimwe chinhu chiri kunetsa ikurudziro yeKomisheni yekuti vafambi vabaye nhomba neasina-EU jekiseni rakatenderwa rinofanirwa kuratidza isina kunaka pre-kuenda PCR bvunzo. Izvi zvinotadzisa kufamba kubva kunzvimbo zhinji dzepasi uko huwandu hwehutachiona hwakaderera, asi huwandu hwevanhu vakabaiwa WHO-majekiseni akabvumidzwa ayo asati awana mvumo yekutonga muEU.
“Hurumende dzinofanirwa kukoshesa mitemo iri nyore, inofanotaurwa uye inoshanda kuitira kuti vafambi vadzore chivimbo chekufamba uye vendege vane chivimbo chekuvhurazve nzira. European Center yeChirwere Kudzora yakajeka mumushumo wazvino wenjodzi wekuti zvirambidzo zvekufamba hazvigone kuve nemhedzisiro yakakura panguva kana kusimba kwedenda renzvimbo. Tinotenda kuti zviremera zvinofanirwa kuramba zvakasvinura, asi kusarura mishonga yakabvumidzwa neWHO kutambisa zviwanikwa uye chipinganidzo chisingakoshesi kurusununguko rwevanhu rwekufamba,” akadaro Schvartzman.